Miverina Amin’ny Fahitalavitra Indray Ilay Ejipsiana Mpananihany Bassem Youssef · Global Voices teny Malagasy
Miverina Amin'ny Fahitalavitra Indray Ilay Ejipsiana Mpananihany Bassem Youssef
Voadika ny 14 Febroary 2014 11:56 GMT
Ao Ejipta, mety mamoaka ny sehonao ao amin'ny fantsona YouTube ianao dia misy fantsona fahitalavitra telo mitazona azy tsy hivoaka. Tamin'ny volana oktobra tamin'ny herintaona ny CBC channel no nanapa-kevitra tsy handefa amin'ny fahitalavitra ny fampisehoan'ilay Ejipsiana mpanesoeso Bassem Youssef mitondra ny lohateny hoe El Bernameg [mg]. Raha iverenana ny tamin'izany fotoana izany dia voalazan'ny [mg] fanambarana fa “nandika ny fifanarahana tamin'ny CBC” ny fizarana voalohany tamin'ny fampisehoana. Namehy ny maripanan'ny toe-draharaha taorian'ny namoahana ny fizarana voalohany ny bilaogera Zeinobia:
Efa tezitra amin'i Bassem Youssef araka ny mahazatra ny Islamista. Efa nankahala azy hatramin'ny fitondran'i Morsi ry zareo ary tsy misy zava-baovao momba izany. Ny vaovao dia ny fihetsiky ny mpanohana ny fitondra-miaramila/mpanohana an'i El Sisi izay tia mihaino an'i Bassel. Tezitra aoka izany ny mpanohana ny miaramila satria nahasahy niresaka momba ny jeneraly ilay mpanao hatsikana!! Tsy naneso azy mivantana akory.
Malaza ao amin'ny twitter i Bassem Youssef sy ny sehony.
Niverina tamin'ny zoma [7 Febroary 2014] tao amin'ny MBC Masr, fantsona fahitalavitra an'ilay mpandraharaha Saodiana Waleed Al Ibrahim ny fampisehoana.
Ary dia efa mifanontany tena sahady ny olona, mialoha ny hivoahan'ny fampisehoana, raha hahasahy hanonona ilay tompom-pahefan'i Ejipta sy ny sahan'ilay Minisitry ny Fiarovana Abdel Fattah El Sisi ilay mpananihany.
@A_AHaleem: Matoky fa tsy hanonona an'i El Sisi i Bassem Youssef, ary handihy hatrany eo ambonin'ireo nofo mangatsiakan'i Ikhwan hatrany hatrany.
Mitrerotrerona amin'ny safidin'i Youssef amin'ny fahitalavitra handefasany ny fandaharany ihany koa ny Dr As'ad AbuKhalil, na Ilay Arabo Tezitra:
Taorian'ny fikarohana tambajotra malalaka ilay ejipsiana mpananihany, Bassem Youssef, no nanapa-kevitra fa ny fahitalavitra saodiana MBC no malalaka indrindra amin'izy rehetra. Mahafinaritra. Matoky aho fa hamela malalaka hanesoeso ny mpanjaka saodiana sy Sisi ny mpampiasa an'i Youssef vaovao
Na izany aza, namehy ny fandaharana i Zeinobia vantany vao vita izany:
Nanomboka tamin'ny hatsikana mampihomehy nanondroan'i Bassem amin'ny fomba ankolaka amin'ny fitiavan'ny maro an'i El Sisi/tafika ny fotoana ary nahafinaritra ny fampisehoana. Nofelahan'i Youssef ihany koa ny CBC sy ny tompony Mohamed El Amin. Nesoesoiny tamin'ny fihetsika tafahoatra nataony ihany koa ireo fahitalavitra rainitetaka namely azy. Nilaza izy fa misy olona iray tsy hotononina anarana sady nasehony ny salovantavan'i El Sisi saingy naverimberiny matetika ny anaran'ilay lehilahy
Mbola nanohy ny firesahana momba ny fitiavan'ny maro an'i El Sisi ao amin'ny fahitalavitra Ejipsana iray i Bassem ary nitatra nankany amin'ny fampisehona nahandro sy fampisehoana lamaody izany.
Ny fanontaniana amin'izao fotoana izao dia haharitra hafiriana ao amin'ny MBC Masr ny fampisehoana, mialoha ny andrenesantsika ny vaovao fa mitady fantsona fahitalavitra vaovao hamoahany ny sehony i Bassem Youssef.